How to convert PDF file? - MYSTERY ZILLION
February 2008 edited January 2009 in DTP
Please let me know how to convert the PDF file from Microsoft Office? Is that any additional software likeaAdobe Acrobat or any Plug to be installed? Could you explain me step by step, Please help me. Thank you very much.
Adobe Professional software install လုပ်ထားလိုက်ရင် Ms Word ကနေ pdf ပြောင်းလို့ရပါတယ်။
Adobe Professional Install လုပ်ပြီးသွားရင် Office(Ms Word) ထဲမှာ Buildin menu တစ်ခု ၀င် သွားပါလိမ့်မယ် အဲဒီကနေလဲ pdf တိုက်ရိုက်ပြောင်းလို့ရပါတယ်၊ အဲလို buildin menu မတွေ့ဘူးဆိုရင်တော့ ပုံမှန် word file ကို print လုပ်တဲ့အခါ print မလုပ်မီ printer name နေရာမှာ Adobe printer သို့မဟုတ် Adobe Pdf နာမည် နဲ့ Printer တခုတွေ့ပါလိမ့်မယ်၊ printer list ထဲမှာရှာရမှာပါ၊ ဒီမှာနမူနာကြည့်ပါ
အဲလို printer name ရွေးပြီးထုပ်လိုက်ရင် PDF file အဖြစ်ထုပ်ပေးပါလိမ့်မယ်၊ ထုံးစံအတိုင်း File Name ရွေးပေးပြီးရင် ပြီးပါတယ်။
ှSoftware တစ်ခုလောက်ရှာလိုက်ပါ။:D Primo Pdf ဆိုတာမျိုးပေါ့။
ဒါမှမဟုတ် google မှာ doc to pdf download လို့ရိုက်ပြီးရှာပေါ့:103:
ပြီးတော့ install လုပ်။ pdf ပြောင်းချင်တဲ့ စာကိုဖွင့်။ file menu ကနေ Print ကိုသွား။
Print ထုတ်တဲ့နေရာမှာ pdf print ကိုရွေးပါ။
ဒါဆိုရင် ok ပါပြီ။
ကျနော် ကတော့ adobe distiller ကို သုံးပါတယ်...
ကျနော်ကတော့ ပုံမှန် ms word file လောက်ဆိုရင် google document and spreadsheets မှာ upload လုပ်ပြီး pdf နဲ့ Save As လုပ်ယူလိုက်တယ်။ ပုံမှန် CV တွေဘာတွေအတွက်ဆိုရင် အဆင်ပြေမှာပါ။ ဖိုင်အကြီးကြီးတွေဘာတွေတော့ စမ်းမကြည့်ဖူးဘူး။
Download PDF converter.
and then...install it.
try to print from ms word.
when print dialog box is appear , choose printer..u already install<not real printer that print out text on paper>
Posted by Fatty_Cat.. ha ha ha
ှStar Office writer ကိုသုံးရင်ရပါတယ်။ အဲဒီကောင်ကို google ကနေ free ပေးပါတယ်။ microsoft office လိုမျိုးပါပဲ..။ အဲဒီကောင်မှာ EXport asapdf file ဆိုတာလေးပါတယ်။ အဲဒါလေးနဲ့တန်းချိန်းယုံပါပဲ..။
ဒေါင်းလုပ်လုပ်ချင်ရင်တော့ .... ။
အဲဒီမှာ agree and download လုပ်လိုက်ပါ..။
ဒီမှာယူstar office ကို click ပေးပြီးယူလိုက်ပါ.
weenyin wrote: »
အကိုရေ .. ယူလို့၇ဘူးဗျ .. လုပ်ပါဦး ......:((
willy ရေ General Purpose pdf generator ကိုလိုချင်ရင်တော့၊ Start Office ကြီးတင်နေစရာမလိုပါ
CutePDF Writer ကိုသုံးပါ။
Install လုပ်ထားလိုက်ရင် Adobe Acrobat Distiller ကဲ့သို့ Printer အဖြစ်နဲ့ system ထဲမှာရှိနေပြီး
ဘယ် application ကနေမဆို ကြိုက်တဲ့ document ကို Print option ထဲမှာ CutePDF Writer ကိုရွေးပြီး
Fine Print PDF factory is the best. Find and install and print directly from anywhere.
အကို့ မှာ acrobat နဲ့ notepad ရှိရင်ရပါတယ်ဗျာ
ကျွန်တော်ဆိုရေးချင်တာကိုအရင် notepad မှာရေးလိုက်တယ်ပြီးရင် print (ctrl+P)နှိပ်လိုက်ပါပြီးရင် adobe acrobat ကိုရွေးပါ
ပြီးရင် print ဆိုတဲ့ခလုတ်ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ အကိုရေးထားတဲ့ စာတွေက pdf file အဖြစ်နဲ့ desktop ပေါ်ရောက်သွားပါလိမ့်မယ်.......ဗျာ:6:
Can do change pdf to psd in File /automate of photoshop old version. But, i can't change after CS2from CS 5. Please tell me. thz
ကျွန်တော့်စက်မှာ adobe professional 11 တင်ထားပေမဲ့ pdf print ထုတ်တဲ့အချိန်ကျရင် error တက်နေတယ်ဗျာ. pagemaker file ကနေ pdf ပြောင်းချင်တာ ဘာဖြစ်လို့မှန်းမသိဘူး ..ကူညီကြပါအုံးဗျာ